मोदीले रुदै भने- 'सुशील कोइरालाले मलाई फसाए' भारतमा भाईरल भयो भिडियो - Nepali Virals
१९ चैत्र २०७२, शुक्रबार ०५:३६	6,907 पटक-पढिएको
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालसँग सम्बन्धित एउटा गोप्य भिडियो यतिखेर भारतमा भाईरल भएको छ।
नेपालको संबिधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै भारतले करिब ६ महिना लामो नाकाबन्दी गर्यो । यसले नेपाली जनता चरम मारमा परे । नाकाबन्दीका कारण अत्याबश्यक औषधिदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्मको अभावले नेपालीहरुले थुप्रै सास्ती खेपे । आयात निर्यात ठप्प हुँदा अर्बौको ब्यापार घाटा भयो ।
नाकाबन्दी हटेको लामोसमय बित्दा पनि खाना पकाउने ग्यास लगायतको इन्धन अझै सहज हुन् सकेको छैन । यसले आम सर्वसाधारणको दैनिकी अझै सामान्य बन्न सकेको छैन । भारतले नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्न बिश्व समुदायलाई समेत गुहारेका छन् । उनले बेलायत लगायतका मुलुकहरुलाई दबाबमा पारि नेपालबिरुद्द बिज्ञप्ति निकाल्न लगाएका थिए ।
यद्यपि भारतले अझै नाकाबन्दी गरेको स्वीकार गरेको थिएन तर आज बिहान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसंग माफी मागेका छन् । उनले यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरुले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको पाप स्वरूप हत्या भएको सपना देखेकाले बिहान उठ्ने बितिक्कै एक भिडियो संदेश जारी गर्दै माफी मागेका हुन् ।
मोदीले आफु नेपाल आउँदा ठूलो सम्मान पाएको र त्यसको ख्याल नै नगरी हस्तक्षेप गरेर नेपाली जनतालाई धोका दिएकोमा ठूलो पश्चाताप भएको बताएका छन् । उनले नेपाली जनताका लागि जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि तयार भएको पनि बताएका छन ।
यस्तो छ सम्बोधन
प्रिय नेपाली जनता नमस्कार ! मैले तपाईहरुबिरुद्ध ठूलो अत्याचार गरे । महाभूल गरे । हिजो राती सपनामा साक्षात भगवान प्रकट भएर मलाई ठूलो शिक्षा दिएर गयो । म नेपाल जाँदा तपाईहरुले कत्रो सम्मान दिनु भएको थियो तर आज म नेपाल आउन नसक्ने भएको छु । म आज भित्रि दिल खोलेर साँचो कुरा भन्दै छु ।
मैले यस अघि पटक पटक नाकाबन्दी नगरेको कुरा भन्दै आए । तर खासमा नाकाबन्दी गरेकै हु । मेरै निर्देशनमा यो सब भएको हो । तर यसका पछाडि तपाईहरुकै नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पनि हात छ । कोइरालाले आफु प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने भएपछि मलाइ दिनरात फोन गरेर समस्या सुल्झाउन भनेका थिए ।
औला सोझ्याएर भए पनि, घुमाएर भए पनि पुन: प्रधानमन्त्री बनाइ देउ भनेका थिए । तर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन । र यो सब भयो । दोष मेरो भन्दा पनि कोइरालाको हो तर अहिले उहा हुनुहुन्न त्यसैले त्यो दोष मेरो भयो । बिदेशीसामू मैले नेपालबिरुद्द उत्रिन दबाब पनि दिए ।
त्यसबेला नेपालमा मात्रै होइन बिश्वभर मेरो बिरोध भयो । तै पनि मैले वास्ता गरिन । म बेहोसी पाराले तपाईहरुबिरुद्द अत्याचार गरे । म अब जस्तोसुकै संजाय भोग्न पनि तयार छु । एकपटक नेपाल आएर नेपाली जनताको खुट्टा छोएर माफी माग्ने रहर छ । के म अब नेपाल आउन सक्छु ?
उनले माफी मागेको भिडियो हेर्न र थप खुलासा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
अघिल्लो प्रचण्डका पाँच कमजोरी
पछिल्लो बाथरुम पसेर युवतीहरुले सोच्ने ११ कुरा